मोरङ जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यपालिका कार्यपालिका सदस्यहरूको निर्वाचन जेठ २१ गते बिहान १० देखि २ बजेसम्म हुने जनाएको छ ।
रेडक्रस भवनमा हुने निर्वाचनबाट महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, १९ वडाध्यक्ष, महिला, दलित र खुला सदस्य गरी ९७ जना मतदाता रहेका छन् ।
कार्यपालिकाका ५ जना महिला सदस्यका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुपर्नेछ भने ३ जना दलित तथा अल्पसंख्यक सदस्यका लागि महानगरपालिकाको मतदाता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
ओलीले भने- किसानलाई मल दिन नसक्ने कृषिमन्त्रीले राजीनामा नदिएर के हेरेर बसेको ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवको राजीनामा मागेका छन् । शनिवार एमाले कार्यालयमा अखिल नेपाल किसान महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले किसानल...
नेकपा एसको प्रश्न- बागमतीको मुख्यमन्त्री छाड्दा अन्त कहाँको नेतृत्व पाउने ?
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको राजीनामा विषय केन्द्रीय गठबन्धनले टुंगो लगाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीले निष्कर्ष निकालेको छ । शनिवार दिउँसो एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बागमती प्रदे...